Hama dzangu hurombo hwakaipa, murume wangu akaporomora kubasa kwake zvokuti mhosva yacho yaitomuendesa kujere kwemakore plus basa raibva rapera ipapo. Sezvineiwo boss wake uyo aive gwere gwere akaronga kuita blackmail my husband so that vakabvuma zvaaida aidropa ma charges bamwana havachaende kujere plus basa vaizoramba vachishanda.
Condition yakapiwa murume wangu ndiyo yaityisa manje. Akanzi na boss uya sarudza zvaunoda, kuenda kujere kana kuti ndosvira mukadzi wako. Murume wangu zvakamunetsa ndokuuya nenyaya kwandiri. Akati iye aisada kupa mukadzi wake saka better aende zvake kujere. Ini ndakazofunga kuti nemaomero aita hupenyu ndaizorarama sei nevana vatatu apa handishande. Ndakati better vamubvumire zvake tinenge tabatsirikana zvakanyanya. Hupenyu hwedu hwainge hwave mumaoko a boss uyu.
Bamwana vakazoudza boss kuti vainge vabvuma kuvapa mukadzi asi vaifana kunyorerana pasi kuti boss havazomutsa nyaya iya zvakare after vawana zvavaida. Ini ndiri mukadzi munaku akatsvuka, chimiro changu vakawanda vanoyemura chero mafundisi chaiwo. Dako ndine chipo chaicho uye makumbo acho aigara akamisa mboro dzevakawanda. Boss ava vaigara vachindiyeva neziso zvekuti vaishaya vangandisvire sei. Zuva rakasvika boss vakafona kuti vaizouya manheru acho kuzozadzikisa chibvumirano. Bamwana vakaswera vakasuwa zuva iri asi chekuita painge pasina. Boss vakasvika vakarova muscle top yavo ne body yaive hot.
Wangu murumw aive nedumbu hombe plus pamboro aive nekadora kainetsa kumira dzimwe nguva. Semurume wangu wandakada ndainge ndatojaira kadora ikako. Ndakazviudza kuti ndichangovhura makumbo ndotarisa pa ceiling kusvika boss vapedza zvavaida, asi hazvina kuzokwanisika. Uyu murume anosvira zvekusvira zviya asiyana nana Ba Tino vanongonyudza votoita hwejongwe vobva varara zvavo. Nemurume wangu hapana pandaisvirwa ndikatundawo, asi handai complainer hangu. Pamwe ndaizoita hangu bonyora ndobva ndatunda. Chakarwadza baTino ndechekuti boss uya akati aida kundisvira varimo. Ndakabviswa hembe dzose ndokuradzikwa nemusana pa bed.
Ba Tino vainge vakagara pa chair vachiona porn movie yemkadzi wavo. Ndakasunga kumeso ndokuvhara maziso. Boss akatanga kundikisa zvekumanikidzira ndokuzotanga kuyamwa mazamo ruoko ruchibata beche. Ndakazonzwa makumbo avhurwa rume rakupinza rurimi mubeche. Ndainge ndisati ndambozviitwa na ba tino. Kana kiss vaiizivirepi havo. Ndakaedza kuramba ndaka cooler asi ndakazokurirwa rurimi ruchitenderedzwa mubeche iro rainge ratota, rakusvimha misodzi. Ndakatanga kugomera nekunakirwa zvekumbokanganwa kuti murume wangu aivemo. Ndakatomboita kuti aaaah aaaah aaaah yoooh shhhhh apo ndakuda kutunda.
Hameno zvakafunga ba Tino vachinzwa izvi. Hapana chinorwadza murume sekunzwa mukadzi wake achichemerera achisvirwa neumwe murume. Boss akaramba achinanzva beche achibata mazamu. Akariburisa rino zimboro rine tsinga rainge banana ndokutanga kuri tenderedza pamatinji angu zvainakidza. Ndakabva ndanzwa kuda kusvirwa nayo. Akaipinza zvishoma nezvishoma wanike ndoshinyira nekunakirwa. Ndange ndisati ndambosvirwa neyairova moyo seya boss uyu. Rume rakatanga kukoira zvakaipa richiyamwa mazamo. Ndakanakirwa zvekuti dai ba Tino vaisavamo ndairidza mhere chaiyo.
Ndakatundazve rume richiri pakati pekuavira zvekuti akaona ndaomesa tsinga dzemakumbo. Akandisimudza ndokundifongoresa pamberi pa ba Tino chaipo akabata gumbo rangu rekwa right ndokurisimudzira apa ndakabatira pa edge ye bed. Akaipinza yose ndikanzwa ichirova moyo. Style iyi ndainge ndisati ndamboisvirwa nemurume wangu. Ko vaingoziva style one chete yekukwira pamusoro ba Tino. Musi uyu vakadzidza zvakawanda pakusvira mukadzi nekumutundisa. Ndakasvirwa kusvika beche rakupisa ndokubva ndatunda zvakare. Ndakaradzikwa futi nemusana ndokusimudzwa makumbo mudenga.
Ndakasvirwa zvandisingakanganwe uye musana wainge wakupisa. Rume rakatundira mukati zvekuti ndakanzwa hurume huchiita kuzara mukati mangu aaaaah hoooah shiiit aaaah rakadaro rume richiwomba apo raitundira beche remukadzi wemunhu. Tapedza boss akazotenda akati tainge taita good decision kuti ba Tino vasaende kujere ndokubuda oenda. Takatadza kutarisana mumaziso na ba Tino kwechinguva ndobva vasimuka vakubuda vachiridza tsamwa asi nechemumoyo ndakangoti dai mukapara imwe futi andipamhe futi.